FA MANIN OA toa afaka manao fidinana an dalam be ny any Frantsa, ARY TSY MATAHOTRA ny filoha frantsay e...
Date: 13 septembre 2017 - 14:43
ny eto an tanana, otran hafahafa an
Re: FA MANIN OA toa afaka manao fidinana an dalam be ny any Frantsa, ARY TSY MATAHOTRA ny filoha frantsay e...
Date: 13 septembre 2017 - 15:17
Zaho koa aza Ragasy mba gaga sy mametra-panontaniana:
-Tsy mahavita azy ve ity Fitondràna ity? Tsy mahafehy ny "débordements" rehefa manao manif mitaky ny zony ny olona.
-sa tsy mahazaka fitokonana satria tsy hamaly ny fitakiam-bahoaka?
-Sa manao ny tsy mety tsotra izao dia matahotra,
-sa maka "précautions" fa sao hiverenan'ny natao?
Jereo ny Président Macron tany St Martin, na mankasitraka ny ataony ny olona na tsia, mahasahy izy miresaka, mihaino "critiques", manome toky. Ary minoa ahy ianao fa tena tanterahiny ny "promesses"-ny.
Fa ny malagasy koa aloha zatra an'ity manindraindra lava izay filoha rehetra mandalo ity e. Tsy manana hazon-damosina mihitsy fa oye oye foana isak'izay mihetsika.
Date: 13 septembre 2017 - 17:10
mila misy 1789 aloha eto
NY ANY ANDAFY TOMPOKO DIA NY SEZA NO MITADY OLONA COMPETENT SY MAHAY FA NY ETO AMINTSIKA NY OLONA NO MITADY SEZA NA DIA TSY EO AZA NO TOKONY HISY AZY DIA REFA AZO NY SEZA DIA AROVANA MAFY DIA MAFY KA FOANANA DAHOLO ZE ZVT METY HAHALASA AZY
Date: 13 septembre 2017 - 17:58
Tena mila mamaky an'ity sy mandini-tena ny filoha Hery .
Date: 13 septembre 2017 - 21:55
Ny eto amintsika seza bois de rose
Date: 14 septembre 2017 - 06:57
zavatra iray ihany no tadiavin'ny vahoaka na eto Mcar na any frantsa dia ny fametraham-pialana rehefa hita fa tsy vita ny asa hapandrosoana ny vahoaka , ny frantsay mahavita mametrapialana izany fa ny eto na trongisina amin'ny buldozer aza eo ihany
Par: gabriel toul
Date: 14 septembre 2017 - 20:25
Izahay kosa ve lazainy fainéants tsy ho romotra hilanja pancarte kle aza
Date: 15 septembre 2017 - 06:38
Ny azy tsinona seza azo t@ fangalarambato dia mihozongozona h@ voalohany. Dia mahana foana isaky ny misy mihetsika na misy miteny.
Dia izao no vokatry ny fifidianana tsy madio. Lany andro miambina ny sezany fa tsy mifantoka @ asa tokony atao.